I-CROWN THAI SPA isiqithi se-Thai exotics eRashiya. Abamenyiwe bamenywa kwiBukumkani baseThailand. Bonke abaphathi bayaphumelela kwaye baphumelele ngokugqithiseleyo iindlela ezihlukahlukeneyo zokusikwa kwe-Thai kunye neemfihlelo ze-aromatherapy. Ukuchukumisa ngobuciko be-masseurs kususa ukukhathala, ukuphumula, kunye nokubaluleke kakhulu - uphilise. Kwiminyaka emininzi, ukusikwa kwama-Thai kuye kwaba njalo kwaye kuyintlupheko yezifo ezininzi nezifo. Iidonons I-CROWN THAI SPA ayimelekanga kuphela eMoscow, kodwa nakweminye imizi. Inethiwekhi ye-CROWN THAI SPA iyanda kwaye ihambela kumazwe ngamazwe, emva kokuvula kwendawo yokubonisa eJamani kwisixeko saseDusseldorf.
Ukusilalisa iThailand - isenzo sokuphilisa
Kwi-Yurophu, ukusilalisa kugubha kunye nokuxubha. I-practice ye-Thai ihluke ngokupheleleyo kwimibono yethu. Inkosi igxininisa ngamaphuzu athile omzimba womthengi kungekhona nje ngeminwe nangentende, kodwa ngeentambo, amadolo kunye neenyawo. Kodwa akukho konke! Olu bunzima lubandakanya uhlobo lokuguquka nokulula, ukukhumbuza i-yoga postures. Ukuhluthwa kwe-Thai yisayensi yonke eyenziwa ngamacandelo amaninzi asemazweni aseMpuma. Le yimfundiso epheleleyo yobomi. Amaphilisi aseMpuma ayiboni njengesiqhelo esahlukileyo. Kubo, indoda iyintlangano yesithathu eyenziwa ngumzimba, umphefumlo namandla (umoya). Izifo, ukukhathala, ukulahleka kwamandla, ukuxhatshazwa-konke oku kukuphilisa abantu baseMpumalanga basayinela uphawu lokuphulwa kwamandla. Ukusikwa kwe-Thai kubuyiselwa ukuhamba kwamanzi okuqhelekileyo. Ngethuba loqheliselo lomsebenzi, inkosi isebenza neendawo ezibalulekileyo zeendlela, apho amandla okuphila ahamba khona.
Iinguqu zeGandi ziqala ngokuphumla
Ukucamngca kumandla omntu wanamhlanje kunokubangela ukumomotheka, kodwa ukulungelelaniswa kwefuthe le-massage yaseThailand kuyinyaniso. Emva koqheliselo olusesikweni, umntu uziva ehlaziyekileyo: umzimba unomdla obumnandi, kwaye emphefumlweni uxolo olupheleleyo. Ngomlambo onamandla wobunzima ufika umnqweno wokudala, ukuthanda, ukufumanisa iindiri ezintsha. Ukufuthwa kwe-massage kukhuthaza ukujikeleza kwegazi, kusebenze iinkqubo zokususa i-toxins, kukukhuthaza ukulahleka kwesisindo. Kwi-network ye-CROWN THAI SPA salons kukho iinkqubo ezahlukeneyo:
Nganye yeenkqubo ziphucula umzimba kunye nomphefumlo. Ngomkhosi omtsha, uya kunqoba yonke into!
Iinkqubo ze-SPA: ubuhle, impilo, uvuyo
Impembelelo emangalisayo ye-SPA izimonyo, i-wraps, ii-oyile kunye neziqhumiso ziye zaziwa ixesha elide. Kwi-network ye-CROWN THAI SPA ungabhalisa nayiphi na inkqubo yokunakekelwa komzimba. I-Masters iya kunceda ukuphumla, ukushiya ingxabano. Ngoxa uzonandipha ama-stale aromas, umculo ococekileyo kunye nefuthe elimnandi, ulusu lwakho luya kubanjwa ngamavithamini, luya kukhanya. I-Wraps ye-algae, i-ginger kunye ne-cloves izokunciphisa inqeni. Kwiseshoni enye unokukrazula ama-5 amentimitha angaphezulu. Kufanele uvavanyo!
Iprogram yeSlim "Minus 7 centimeters"
Kwiindawo ezingenammangaliso zasezidolophini, kunzima kubafazi ukugcina ukuvisisana nokukhanya. Umsebenzi we-Ofisi awunalo negalelo lokuphila ngendlela enempilo. Ngamanye amaxesha ukutya kunye nokuzivocavoca akuyi kuzisa umphumo oyifunayo. Ingxaki inokuthi ixazululwe ngokulula kwi-CROWN THAI SPA saloon, ebhalisiwe ukuba ihlaziye i-massage "Minus 7 centimeters". Le nkqubo yokulungisa idibanisa inikezela ngempumelelo. Imfihlelo yindlela ekhethekileyo yokusikwa kwe-massage kunye ne-revolutionary fat-burning burner i-Gold Shape ne-pollen ka-garcia. Uza kufezekisa ngokukhawuleza umphumo oyifunayo, ube ngumncinci, kwaye iisentimitha ezingaphezulu aziyi kubuya.
I-Ayurvedic massage: ubuchule, ubuchule
Unokunyamekela njani umdlalo?
Ukuzivocavoca kwimeko efanelekileyo yentloko kunye nokusuka
Ukutya okunempilo kwesikhumba
I-liposuction yesibindi sesibini
Intambo yavikela umculi uBuzovy
Uhambo lokuqala ukuya kwi-gynecologist ye-adolescence
Kuthetha ukuthini amaphupha ashulayo?
Umculi uNksusha Shurochkina, i-biography
Umthandi otshatileyo - amashishini kunye ne-pluses
Iwayini elifudumeleyo (iwayini elininzi)
Indlela yokubukeka ibiza kwaye ihlambuluke ngaphandle kweendleko ezithile: Imifanekiso enemifanekiso kunye neengcebiso zengqondo yengqondo
IHoroscope ye-Scorpio-Abafazi ngoNovemba 2016
I-Cream-soup of carrots
Iintlanu eziphezulu zixubushe ngokuqhawula iziqabane zeenkwenkwezi zasekhaya ngo-
Iiswibesi ezingabi ngcono
Iingcamango zobumba zokubhaka ekhaya - i-pancake eluhlaza, iifestile kunye neefoto
Ephakathi kwehlobo, kwaye i-tan yakho ayigqibekanga? Indlela yokukhetha iindlela ezifanelekileyo